MAANSO: XUSUUS | Maankaab.com
26th May 2017 | Published by: maankaab
Waxa uu halkan Abwaanku kaga waramayaa,waagii dalka Somaliland lagu soo noqday,ahaydna xilligii 1991,siyaaro iyo booqasho uu ku tagay, gurigii loo yaqaanay Fooqa jajabka ee ku yaalay ,dooxa wayn ee Hargeysa dacalkiisa Waqooyi ; waxa uu abwaanku sida maansadiisa ka muuqata uu goobta ku arkay , raggii halgankii dalka loosoo maray ku naafoobay oo goobtaasi yaalla.
Waxa uu labadiisa indhood uu saaray , iyagoo meel dooxa qarkiisa ah, hangar weyn oo ku yaala jiif-jiifa, wuxuu ahaa muqaal aad looga naxo,aadna u niyad jabiyay Abwaanka,kuwaasi oo aan haba yaraatee aan haysan wax daryeel ah .
Aragtidii naxdinta lahayd ee uu Abwaanku wakhtigaasi arkay waxa ay ka keentay in uu tiriyo maanso la magac baxday XUSUUS, taasi oo uu ku tibaaxaayo,dayacii iyo darxumadii xiligaasi ka muuqatay Mujahidiinta.
Inkaastoo ilaa maantadan lafteeda la odhan karo, malaha ragii wakhtigaasi dalka usoo dhintay dadkii ay ka tageen iyo kuwii iyana usoo naafoobay ,qaar badan oo ka midii ,wali mayhelin,daryeelkii iyo xanaanadii ay uga baahnayeen dawladnimadii iyo calankii ay dhiigooda ku dhaliyeen.
Taas awadeed ayaa ilaa hadda aynu odhan karaynaa, waa mid jirta waxa ay maansadani ka hadlaysaa,iyada oo taagnaandoonta, ilaa inta ay helayaan xaqii iyo xuquuqdii ay ku lahayeen Qarankii ay u dhinteen una dhawacmeen.
Waxaa uu yidhi :-
Jirrab nolosha waa loo maraa
Belo usoo jooge.
Jaallihii markuu ina jaree
Ninkii juuq yidhaahdaba markii
Jeelka lagu tuuray.
Jidh-dilkiyo naftoo layska jaro
Jumladaa xabaalaa markay
Cagaf ku jiidaysay.
Dhabar jabinta iyo ciidankii
Jananadi tadhahay wiilashii
Jiifka uga dhaartay.
Jarmaadaa aroortii raggii
Jeelasha u daatay.
Raggii jariyo buuraa jafee
Raadka daba joogey
Raggii shalay jidiinkoo qalalan
Jiiftaanka daalka-leh raggii
Weerar kala jiidey.
Raggii aan dagaal laysku jaray
Dib uga soo jeesan.
Raggii calanka soo joojiyee
Faqash kasoo jiidey.
Bay u jabayeene.
Jalka kama helaan nationkay
Dhamac u jiidheene.
Intii aan jihaadkii ku dhiman
Nolol wixii jooga.
Jajabkii ka hadhay baan arkoon
Togga-Herer badhbaa jooga oo
Waaxyaha kuwii laga jaraa
Jeeraradii baa ku taal
Jeenyaha raggii laga jaraan
Cidi u juuqayNe.
Araggaad kasii jeesataa
Jabaqdiyo jugtii weli madfaca
May xusuus jarine.
Jirrab haysta awgii ayey
Yaa ka jeebi xabadii ragbay
Weli dhex jiifaane.
Maansadan aadka u qiirada badan waxaa tiri yahy Abwaankeena wayn ee
Yusuf Roobleh Xirsi(Sandoon)